कम्पनी भन्छ : ‘सरकारले भनेर हुन्छ हामी ‘नम्बर वान’ छौँ’ - Malayakhabar
होम पेज देश समाचार कम्पनी भन्छ : ‘सरकारले भनेर हुन्छ हामी ‘नम्बर वान’ छौँ’
कम्पनी भन्छ : ‘सरकारले भनेर हुन्छ हामी ‘नम्बर वान’ छौँ’
मान्छेलाई लाज पचेपछि वा कसैको डर नभएपछि उसले जे पनि गर्छ भन्ने उदाहरण पछिल्लो समय ‘मारुती सिमेन्ट’ बनेको छ । मारुती सिमेन्ट गुणस्तरहीन रहेको प्रमाणित भएपछि विकास निर्माणको काममा प्रयोग नगर्न नेपाल सरकारअन्तर्गत रहेको गुणस्तर तथा नापतौल विभागले केही दिनअघि निर्देशन दिएको थियो । तर, उक्त सिमेन्टले सरकारको निर्देशनलाई अटेर गरी विकास निर्माणको काम जारी राखेको छ ।
मारुती सिमेन्ट प्रालिको उत्पादनमा कम गुणस्तर पाइएको भन्दै विभागले १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन गत हप्ताको बुधबार पत्राचार गरेको थियो । विभागले पत्राचार गरेको एकसाता बितिसक्दा पनि मारुती सिमेन्टले आफ्नो गल्ती स्वीकार्नु कता हो कता झनै गर्वसाथ ‘हाम्रो सिमेन्ट ठिक छ ढुक्क भएर प्रयोग गर्नुस्’ भनेको छ । यसको मतलव के अब कारबाही विभागलाई गर्नुपर्ने हो ? के विभागले कुनै कम्पनीलाई फसाउन झुठो आरोप लगाएको हो ? होइन भने यस्तो गम्भीर विषयमा विभाग किन मौन देखिएको छ । आम सर्वसाधारणको प्रश्न हो यो ।
एकातिर सिमेन्ट प्रयोग नगर्नु, यो गुणस्तरहीन छ भन्दै एउटा विज्ञप्ति निकालेर विभाग मौन बसेको छ । अर्कोतर्फ सिमेन्टका सञ्चालकहरू पैसा र पावरका भरमा यो केस सल्ट्याउने प्रयासमा उद्दत भएको जानकारहरू बताउँछन् । हुन त मारुती सिमेन्टलाई यस्तो स्पष्टीकरण सोधिएको यो पहिलोपटक होइन । यसअघि पनि यस्तै, खालका विषयवस्तुमा यो सिमेन्टलाई विभागले पत्राचार गरिसकेको छ । तर, पैसा र पावरकै भरमा कारबाही भने अहिलेसम्म हुन सकेको जानकारहरूको जिकिर छ । यसअघि पनि करछलीको आरोप लागेको यो उद्योगलाई सेटिङमै उन्मुक्ति दिएको नजिर रहेको उपभोक्ताकर्मीहरूको भनाइ छ ।
गुणस्तरहीन मारुती सिमेन्टले बजारमा सिमेन्टको बिक्री रोकेको छैन । जसले आम उपभोक्ताले निर्माण गरेका संरचना जोखिमपूर्ण देखिएको छ । यसको जवाफ कसले दिने अहिलेको मुख्य प्रश्न हो यो । यस्तो गम्भीर विषयमा जनताको जिउधनको विषयमा सम्बन्धित निकायले कुनै एक्सन न लिनुलाई अर्थपूर्ण रहेको बताइन्छ । यता, मारुती सिमेन्टका कर्तुतबारे हामीले बुझ्न खोज्दा आफूलाई केही पनि थाहा नभएको बताउने मारुती सिमेन्टका जिम्मेवार कर्मचारी यस प्रकरणमा केही बोल्न चाहेनन् ।
मारुती सिमेन्टबाट संकलन गरिएको नमुनाको कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ ७ र २८ दिनको मान क्रमश : ३३ र ४३ हुनुपर्नेमा ३१ र ३७ मात्रै देखिएको विभागले जनाएको छ । मारुती सिमेन्टलाई गुणस्तर प्रमाण चिन्ह ऐन, २०३७ अनुसार स्पष्टीकरण सोधिएको विभागले जनाएको हो । यसैबाट उपभोक्तलाई ठगी गर्न उक्त कम्पनीले गुणस्तरहीन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको प्रष्ट देखिन्छ ।
लुटधन्दा चलाउने अनि ‘हामी बनाउँदैछौँ नेपाललाई’ भन्ने हास्यास्पद नारा बोकेर आम जनतालाई झुक्याइरहेको र आमजनताको जिउधनमाथि खेलबाड गरेको यो सिमेन्टका विगतमा पनि थुप्रै कर्तुतहरू सार्वजनिक भएका थिए भने अहिले पनि थुप्रै कर्तुतहरू खुलासा हुने क्रममा रहेका छन् ।
अहिले देखिएको सिमेन्टमा ठगीधन्दा यसको कुनै नौलो होइन । यसअघि विद्युत् चोरको लिष्टमा अगाडि देखिएको यो कम्पनी बिजुली चोरेर देशलाई ठगिरहेको त प्रमाणित नै भएको छ, यस्तै यो सिमेन्टले विभिन्न तरिकाले भ्याट छल्ने गरेको तथ्यको पनि खुलासा भएको थियो । यसका यस्ता कर्तुतहरू थुप्रै रहेका छन् ।
जसरी पनि कमाउ धन्दामा लागेका यस कम्पनीका मालिकहरूले सबैतिर ‘सेटिङ’ मिलाएकै कारण यो सबै गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । मारुती सिमेन्टकै कर्मचारीले यस्तो खुलासा गर्ने गर्छन् । आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा मारुती सिमेन्टकै एक कर्मचारी भन्छन्– ‘यसअघि पनि विभिन्न उजुरी परे, विभिन्न विवाद आए तर कसैले केही गर्नेवाला छैन सबै मिल्छ ।’ मारुती सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्ता नन्द किशोर राठी हुन् ।
हिमालय टाइम्सलाई प्राप्त जानकारीअनुसार मारुती सिमेन्टले शक्तिकेन्द्रकै आडमा आफ्ना ठगीधन्दा चलाइरहेको छ । ‘राम्रोसँग छानबिन ग¥यो भने यसका धेरै कर्तुत बाहिर आउँछन्’, स्रोत अगाडि भन्छ, ‘देशका प्रतिष्ठित कलाकारहरूलाई राखेर विज्ञापन गर्न लगाएर सिमेन्टले आममानिसलाई झुक्याउने काम गरिरहेको छ ।’ यस्तो ठगीधन्दा चलाइरहे पनि उन्मुक्ति पाइरहेको मारुती सिमेन्टका मालिकलाई कारबाही हुने कुरामा धेरैको शंका छ ।
हामीले यस विषयमा मारुती सिमेन्टका प्रतिनिधिसँग बुझ्न कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ । तर, हाम्रो प्रश्न सुन्नासाथ सम्बन्धित विभागमा फोन दिने भन्दै लगातार फोन काटियो र सम्पर्कमा आउन कोही चाहेन । सरकारले सिमन्ट गुणस्तरहीन भएको भनिरहँदा पनि यो सिमेन्ट प्रयोग गरी निर्माण कार्य जारी छ । कमजोर सिमेन्ट प्रयोगबाट भोलि हुने क्षतिको जिम्मेवारी कसले लिने ? यो गम्भीर प्रश्न रहेको छ ।
अघिल्लो लेख १० औँ महाधिवेशनमा एमालेमय बन्यो चितवन : आजबाट भब्य शुरु हुँदै।